Ukubuyekezwa kwe-Amazon Flex: Kuyini? Kubaluleke? | Izindaba zamagajethi
Ukubuyekezwa kwe-Amazon Flex: Kuyini? Kubaluleke?
UPaco L Gutierrez | | Amazon, General
I-Amazon Flex iya ngokuya ithandwa kakhulu muva nje futhi kujwayelekile ukubona izikhangiso noma ukuzwa ngayo Kepha yini i-Amazon Flex? Yisevisi ye-Amazon yalabo abanquma ukusebenzela inkampani ngokuletha amaphakheji ngokuzimela. Ipulatifomu enhle lapho i-Amazon izuzisa futhi izuzise labo basebenzi abafuna ukuba ngabaphathi babo, ukuze bakwazi ukuthola imali ethe xaxa ngokusabalalisa amaphakheji abo, into enkulu kubo bobabili amaqembu.
Ngokweminye imibono yabasebenzi abasabalalisa ngale nsizakalo ye-Amazon, Ungathola cishe u- € 56 ngamahora amane nje okusebenza, into engacabangeki cishe kunoma yimuphi umsebenzi oyisisekelo namuhla. Uma unentshisekelo yokusebenzela i-Amazon ngokuzimela, hlala nathi, ngoba sizokutshela isinyathelo ngesinyathelo ngokuningiliziwe ukuthi kuyini, ungabhalisa kanjani, yiziphi izidingo abazibuzayo nokuthi kunenzuzo kuwe noma cha .
1 Izidingo nokubhaliselwe
2 Iholo namahora
2.1 Izindlela zokukhokha
3 Isebenza kanjani
4 Imibono yabanye abasebenzi be-Amazon Flex
Ukuze usebenze e-Amazon njengomuntu oletha ezizimele kufanele uhlangabezane nezidingo eziningi. Iningi lilula futhi liyabiza kakhulu kunoma ngubani ofuna ukusebenza kulo mkhakha. Ake sibone izidingo eziyinhloko ohlwini:
Bhaliswa kwezokuphepha komphakathi njengabantu abazisebenzayoVele kufanele ukuthi sibe sesikhathini ekukhokheni izitolimende zanyanga zonke.
Yiba nemoto yakho kanye neB ilayisense yokushayela.
I-smartphone enoxhumo lwedatha yohlelo I-Android noma i-iOS.
Ukuthi imoto yethu isekela isisindo esiphezulu samathani amakhulu amabili.
Ubuncane beminyaka Iminyaka ye-18.
Azikho izihloko ezithile zanoma yiluphi uhlobo ezidingekayo, azikho izifundo eziphansi.
Ukubhalisela i-Amazon Flex singakwazi finyelela ekhasini labo elisemthethweni futhi silandele izinyathelo zakhe ngokucophelela.Siphinde sibe nesicelo esinokufinyelela okuqondile kusuka kuwebhu.
Ngokwewebhusayithi yakwa-Amazon uqobo, singathola umholo ofinyelela kuma-euro angama-56 ngamahora amane okusebenza. Amashejuli asungulwa ngumthengisi uqoboNjengoba kungumsebenzi wokuzimela ngokuphelele, ungasebenza amahora owafunayo. Izinkokhelo zenziwa yi-Amazon njalo ngoLwesibili nangoLwesihlanu wesontoIsibonelo, uma usebenza kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu, uzokhokhelwa ngoLwesihlanu, kepha uma wenza ukusatshalaliswa phakathi koLwesihlanu noMsombuluko olandelayo, uzokhokhelwa ngoLwesibili.
Ukuqoqwa kuzokwenziwa nge-akhawunti yethu yasebhange ehlotshaniswa nephrofayili ngaphandle kwezindleko ezengeziwe zanoma yiluphi uhlobo. Njengomuntu ozilethela umsebenzi, ukunakekelwa kwemoto, kanye nophethiloli kuzoba umthwalo wesisebenzi. Uma ngolunye usuku sishiya emsebenzini, mhlawumbe ngoba singasenantshisekelo noma ngoba sithole okuthile okungcono, i-Amazon izokhokha inani elakhiwe kuze kube yilolo suku.
Njengoba sike sasho phambilini, njengoba sikwazi ukuzimela, sibeka uhlelo, kepha kumele sibe nesibindi futhi sibe nesibopho sokuletha wonke amaphakethe ngosuku lwawo olubekiwe, ngakho-ke kufanele sithathe wonke amaphakheji esaziyo ukuthi sizokwazi ukuwaletha.
Singabaphathi bethu, ngakho-ke sizohlela umsebenzi ngendlela efanele thina, kungaphezulu Ngenxa yesicelo sayo singaxhumana nabanye abasabalalisi be-Amazon Flex uma kwenzeka kuvela umcimbi ongalindelekile futhi asikwazi ukubhekana nayo yonke imiyalo.
Ukusebenza ku-Amazon Flex kulula njengoba kuzwakala, lapho silanda uhlelo lwe-Amazon Flex, amaphakheji azoqoqeka kumabhulokhi wokulethwa. Kulesi sicelo sizothola ukunikezwa kokusatshalaliswa kwezimpahla ezizotholakala kithi kuphela, kufanele sibamukele noma sibenqabe ukwenza indlela yomthengisi olandelayo.
Uma kwenzeka wamukela ukusatshalaliswa okuhlongozwe kuhlelo lokusebenza, kufanele siye esiteshini sokuqoqa esinikezwe uhlelo lokusebenza, sizolayisha wonke lawo ma-oda esiqwini semoto yethu bese sizoshiya ukubhekana nawo. Le nkampani incoma ukuthi ungezi nomngane wakho ukuzokudiliva, ngoba isikhala esiningi unaso, lapho ukwazi ukuphatha khona ama-oda. Ukusebenza kahle kubaluleke kakhulu, lapho ama-oda amaningi enza ngcono.
Kunconywa ukusebenzisa imoto exubile, lapho ingxenye engemuva ibanzi impela ngoba lapho samukela i-oda, asazi ngokuqinisekile ukuthi yakhiwa amaphakheji amangaki, ngakho-ke kungenzeka ukuthi sonke asilingani. I-Amazon Prime ine-max futhi izoletha amaphakheji ayo ngokushesha okukhulu ukuze amakhasimende ayo ajabule, ngakho-ke kufanele siwanakekele futhi siwayise kumamukeli wawo ngokushesha okukhulu.
Imibono yabanye abasebenzi be-Amazon Flex
Mayelana nombono wabasebenzi abathile, muhle kakhulu, abaningi basebenzise ithuba lokuvalelwa kwalolu bhubhane lapho belahlekelwe ngumsebenzi wabo wangaphambilini ukuze banikeze leli thuba ithuba futhi bebengeke bajabule kakhulu. Abanye balaba basebenzi baphawula ukuthi manje bahola imali ethe xaxa kunasemsebenzini wabo wangaphambili nokuthi ukube bebazi ngaphambilini, bazothatha isikhathi eside kakhulu.
Inzuzo enkulu ngokungangabazeki iholo, ama-euro angama-14 ngehora yinto embalwa etholwa ngisho nezifundo, kulokhu kukhuliswa kakhulu, ngoba azidingi noma yiluphi uhlobo lokulungiselela kwangaphambilini noma isihloko sezemfundo. Enye inzuzo enkulu abahlengi be-Amazon Flex abayiqokomisayo yisheduli, ukuba nesheduli yakho ukuzivumelanisa nezidingo zakho, okuthile okubanikeza ukuthula kwengqondo okukhulu lapho bephatha impilo yabo yangasese. Amaholide ayafana kakhulu, yize kuvame ukushiwo ukuthi abaziqashile abalazi lelo gama.
Phakathi kokubi, sithola lokho ebesingakuthola kunoma yikuphi ukuhweba esizisebenzisayo ngokuzimela, ngoba asazi ngokuqinisekile ukuthi sizonqoba nini unomphela. Ini kufanele sinakekele ukukhokha imali yethu yokuphepha komphakathi sisodwa njalo ngenyanga nokuthi yini uma imoto iphuka, ngaphezu kokuthi kufanele inakekele ukulungiswa kwayo, asikwazi ukuqhubeka sisebenza, ngakho imali engenayo izokwehliselwa ku-0.
Phawula uma kwenzeka umusha ekuzisebenzeleni, labo abazisebenzelayo abanalungelo lokuthola inzuzo yokungasebenzi, ngakho-ke uma siphoqeleka ukuba sime ngenxa yokonakala kwemoto yethu, ngeke sibe nakho ukuziphilisa esingakudonsa size sikwazi ukuyilungisa. Lokhu kwenzeka noma ikuphi uma sizimela.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Amazon » Ukubuyekezwa kwe-Amazon Flex: Kuyini? Kubaluleke?
Sivivinye izinsiza ze-Hama "Influencers"
Amadili amahle kakhulu we-Cyber ​​Monday